Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Anal and perianal disorders စအိုနေရာ ရောဂါများ
ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာရှိပါကဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ အိမ်ထောင်၊ ကလေး ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်။ "လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။" ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ Facebook ကနေ မေးတာလဲ ပြန်ရှာရတာမလွယ်လို့ အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။ ဆေးပညာစာတွေ ဖတ်လိုပါရင် မာတိကာ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။- http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ဆေးပညာစာများ- http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ- http://yamuna-online-clinic.blogspot.in ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://my-sayawun-life.blogspot.in/ ဆရာဝန်ဘဝ အမှတ်ရတာတွေ - http://dts-political-page.blogspot.in/ နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာ- http://yamunaclinic.org/ ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://facebook.com/tint.swe.dr Facebook Wednesday, December 21, 2011
Anal and perianal disorders စအိုနေရာ ရောဂါများ
ကျွန်တော့် အသက်က ၂၆ နှစ်ပါ၊ (့) မှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ စအိုအဝမှာ အဖုသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ကင်ဆာလား ဘာလားလဲ မသိပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာလဲ မသိပါဘူး။ အဲလိုအဖုလေးတွေက အရင်က သွားနှတ်တုန်းက antibiotic သောက်ရင် အာခေါင်တို့ ဘာတို့ မှာ အဖုလေးတွေပေါက်တတ်ပါတယ်။ အခု စအိုအဝမှာ အဖုလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ရုတ်တရတ် မသိသာပါဘူး၊ ဆရာဝန်ကို ဘယ်လိုပြသင့်လဲ ပြောပြပါအုံး။ အရင်က ဝမ်းချုပ်လို့ ဝမ်းပျော့ဆေး ခဏခဏ သောက်ရပါတယ်၊ ဝမ်းမသွားတာ ကြာရင်လဲ စအိုခဏခဏ ကွဲပါတယ်၊ ဒီတခေါက်ဖြစ်တာ အဝမှာ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်တာနဲ့ မှန်နဲ့ သေချာကြည့်တော့ အဖုလေးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်တော့ လက်နဲ့ ဖဲ့ကြည့်ပါသေးတယ်၊ မပဲ့ပဲ သွေးပဲထွက်ပါတယ်။ မရိုမသေ ဆရာ့ဆီကို ပုံပါပို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့လလောက်တုန်းကမှ ဖြစ်တာပါဆရာ။
Anal and perianal disorders စအိုနေရာ ရောဂါတွေဟာ အပြင်လူနာတွေထဲမှာ အတော်များတယ်။ ၂ဝ% လောက် ရှိတတ်တယ်။ အများစုကိုလဲ အပြင်လူနာအနေနဲ့ ကုသလို့ ရတယ်။ Abscesses ပြည်တည်နာ၊ Thrombosed piles သွေးကြောပိတ်တဲ့ လိပ်ခေါင်းရောဂါမျိုးက အရေးပေါ် ဖြစ်တတ်တယ်။ စအိုတဝှိုက်မှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေ -
1. Anal carcinoma စအို ကင်ဆာ၊
2. Anal fissure စအိုကွဲနာ၊
3. Anal fistula ဂရင်ဂျီနာ၊
4. Anal warts ကြွက်နို့
5. Haemorrhoids လိပ်ခေါင်း၊
6. Hidradenitis suppurativa နာတာရှည်ပြည်တည်နာလေးများ၊
7. Imperforate anus မွေးရာပါ စအိုပေါက်မပါခြင်း၊
8. Perianal abscess စအိုဘေးအနာ၊
9. Perianal haematoma စအိုဘေး အထဲမှာ သွေးယိုထားခြင်း၊
10. Pilonidal cyst and sinus အိတ် နဲ့ (ဆိုင်းနပ်စ်) တဖက်ပေါက်ပြွန်နာဖြစ်ခြင်း၊
11. Pruritus ani စအိုဘေးယားယံခြင်း၊ 12. Rectal prolapse စအိုကျွံကျနေခြင်း၊
• Fissure-in-Ano (FIA) စအိုကွဲနာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/10/fia.html
• Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/fistula-in-ano-fia.html
• Anorectal diseases စအို-အစာဟောင်းအိမ် ရောဂါများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/12/anorectal-diseases_17.html
• Piles လိပ်ခေါင်းရောဂါ အမေး-အဖြေများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/07/q-and-on-piles.html
• Piles (Hemorrhoids) Treatment လိပ်ခေါင်းကုနည်းများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/hemorrhoids-treatment.html
• Proctitis စအို ရောင်ခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/12/proctitis.html
ရေးပြီးသားတွေ့ စအိုနဲ့ တဆက်ထဲရှိတဲ့ အစာဟောင်းအိမ်မှာ ဖြစ်တာတွေပါ။ အခုရေးမှာတွေက စအိုအနီးအနားမှာ ဖြစ်တာတွေပါ။ Perianal haematoma ထိခိုက်မိလို့ အထဲမှာ သွေးယိုရာကနေ စအိုဘေးမှာ သွေးခဲဖေါင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သူ့အလိုလို ပျောက်သွားမယ်။ Anal warts စအိုဘေး ကြွက်နို့၊ ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ Papilloma viruses ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ STDs လိင်တဆင့် ကူးစက်နိုင်တယ်။ တချု့မှာ အနေရခက်ရုံသာ ခံစားရပေမဲ့ တချို့ကျ အနာဖြစ်လာတတ်တယ်။ သွေးထွက်နိုင်တယ်။ ခုခံအားကျနေရင် ဆိုးမယ်။ Surgical excision ထုံဆေးနဲ့ ခွဲစိတ်နိုင်တယ်။ အရေပြားအကောင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ချန်သင့်တယ်။ စအိုကျဉ်းသွားမှာကို သတိထားရမယ်။ HIV နဲ့ Hepatitis B ဘီပိုးရှိနေသူတွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဘက်တွေကိုပါ စစ်ဆေးကုသပေးရမယ်။
Perianal abscesses စအိုဘေး ပြည်တည်နာ၊
ဖြစ်တာ မနည်းလှဘူး။ နာမယ်၊ တင်းနေမယ်။ ကောင်းကောင်း ဖိထိုင်လို့ မရဘူး။ ရောင်ဖေါင်းနေမယ်။ ယောက်ျးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ စအိုထိန်းကြွက်သားကွင်းအောက်က တက်စေ့တွေ ရောင်နေမယ်။ ဒီရောဂါနဲ့အတူ Tuberculosis တီဘီ၊ Actinomycosis, Crohn's disease နဲ့ Mucinous carcinoma ကင်ဆာတွေပါ ရှိနေမလား စစ်ဆေးရမယ်။ Anal abscess စအိုပြည်တည်နာ၊ နာမယ်၊ ရောင်မယ်၊ ပြည်ထွက်မယ်၊ တခြားရောဂါခံမရှိဘဲ ရုတ်တရက် ဖြစ်တတ်တယ်။ အသက်အရွယ် အလတ်ပိုင်းမှာ အဖြစ်များတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ပူနိုင်တယ်။ ချမ်းနိုင်တယ်။
External hemorrhoid thrombosis အပြင်လိပ်ခေါင်း သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နဂိုကတည်းက လိပ်ခေါင်းရှိနေသူတွေမှာ ရုတ်တရက် အတင်းနာလာမယ်။ ဖိမခိုင်နိုင်ဘူး။ တချို့မှာ သွေးထွက်နိုင်တယ်။ အပြင်လူနာအနေနဲ့ ထုံဆေးပေးပြီး ခွဲပေးရင် တခါတည်းသက်သာသွားတယ်။
Pruritus Ani စအိုနေရာ ယားခြင်း၊
Excessive moisture စိုထိုင်းမှုများရာကနေဖြစ်နိုင်တယ်။ သန့်ရျင်းမှု လိုသွားခဲ့တာကနေလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ချွေးထွက်များရာကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Hemorrhoids လိပ်ခေါင်း၊ Anal fissures စအိုကွဲနာရှိနေသူတွေမှာ တွဲဖြစ်တတ်တယ်။ Overuse of topical treatments လိမ်းဆေးအသုံးများလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ (ကော်တွန်) အဝတ်အစားသာ သုံးသင့်တယ်။ ပေါင်ဒါ-ဆပ်ပြာ မတည့်တာ သတိထားပါ။ မကုပ်မိအောင် သတိထားပါ။ Pinworms တုပ်ကောင် (သန်ကောင်) ရှိနေသူတွေ ညအချိန်မှာ စအိုကယားတယ်။ Albendazole (Albenza) Mebendazole (Vermox) နဲ့ ဆေးတွေကို အများဆုံးသုံးတယ်။ တကြိမ်ထဲပေးတယ်။ ၂ ပါတ်နေရင် နောက်တခါ ဆေးထပ်သောက်ရမယ်။
Hidradenitis suppurativa (ဧိုက်ဒရာဒင်နိုက်တစ်-ဆက်ပြူတီဘာ) ရောဂါ၊
နာတာရှည် ချွေးထွက်အိပ်လေးတွေမှာ ရောဂါ ဖြစ်တာ။ ပေါင်ခြံ၊ ချိုင်းစတဲ့ ကိုယ်ရဲ့တခြားနေရာတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ခေါင်းမဲ ဝက်ခြံလိုထွက်မယ်။ နီနိုင်တယ်။ နာမယ်။ ပြည်တည်နာလေးတွေလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပြည်ခွဲထုတ်ရနိုင်တယ်။ ပြည်ပေါက်လို့ ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ အမာရွတ် ကျန်နေမယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်ပိုတယ်။ ပိုးသေဆေး၊ အနာ-အရောင် သက်သာဆေးတွေပေးရမယ်။
Pilonidal cyst (ဆစ်စ်) အိတ်ဖြစ်ရောဂါ၊
အကာပါတဲ့အိတ်ကလေးမျိုးဖြစ်နေတာ။ စအိုပေါက်နဲ့ ၅ စင်တီမီတာ အကွာလောက်မှာဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ အမွှေး၊ အရေပြားတစ်ရှူး စတာတွေရှိနေမယ်။ ရောဂါပိုးမဝင်ရင် ဘယ်လိမှ မခံစားရဘူး။ ပျောက်ပြီး ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ လူ တသိန်းမှာ အစိတ်လောက်ဖြစ်တယ်။ လူငယ်ပိုင်းပိုဖြစ်တယ်။ စအိုအနားသာမက လက်မှာလဲ လာဖြစ်နိုင်တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသရတယ်။ Abscess ပြည်တည်နာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ Rectal prolapse စအိုကျွံကျနေခြင်း၊
Pilonidal sinus (ဆိုင်းနပ်စ်) တဖက်ပေါက်ပြွန်နာဖြစ်ခြင်း၊ စအိုအထက်က ကြားနေရာမှာဖြစ်တယ်။ အနေရခက်တယ်။ အလုပ်ပျက်တယ်။ ယောက်ျားတွေ ပိုဖြစ်တယ်။ ဒုတိယ-ကမ္ဘာစစ်အတွင်း စစ်-ဂျစ်ကား မောင်းသူတွေမှာ သိပ်ဖြစ်ကြလို့ Jeep disease လို့ခေါ်တယ်။ ငယ်ရယ်သူနဲ့ ကြီးရင့်သူတွေမှာ အဖြစ်နည်းတယ်။ လူဝရင် ပိုဖြစ်တယ်။ Anaerobic bacteria ဗက်တီးရီးယားတွေက Staphylococci နဲ့ Haemolytic Streptococci တွေထက် ပိုများတယ်။ broad spectrum antibiotics ပေးရတယ်။ နာမယ်၊ အရည်ထွက်မယ်။ Acute pilonidal abscess အနာပေါက်တာကနေစဖြစ်တယ်။ Chronic pilonidal disease နာတာရှည်အနာဖြစ်လာမယ်။ ခွဲစိတ်ကုသရတယ်။ ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။
- တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အရေးကြီးတယ်။
- Phenol injection ထိုးဆေးနည်းသုံးကြတယ်။
- Incision and drainage ခွဲပြီး အရည်-ပြည် ထုတ်ပေးနည်း။ ဘဲဥပုံလှီးဖြတ်၊ အထဲကထုတ်စရာတွေအကုန် ခြစ်ထုတ်၊ တလနေရင် ၉ဝ% ကောင်းတယ်။ ခြစ်မပြစ်ရင် ၅၈% ကောင်းတယ်။ - Excision and healing by secondary intention ခွဲထုတ်ပြီး အတိုင်းထားခြင်း၊ ပြန်ခွဲပေးရတာများတယ်။ ဘဲဥပုံခွဲပေးတယ်။ နောက်တနည်းဖြစ်တဲ့ Marsupialisation နည်းဆိုတာ အနာနှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဘေးကအရေပြားမှာ လှန်ပြီး ချုပ်ေးနည်းဖြစ်တယ်။ - Excision and primary closure ခွဲထုတ်ပြီး တခါတည်း ပိတ်ပေးခြင်း၊ ရက်တိုတိုနဲ့ အနာကျက်မယ်။ - Excision with reconstructive flap techniques ခွဲထုတ်ပြီး အသားစဖုံးပေးနည်း၊ နည်းကောင်းလို့ ယူဆတယ်။ ပလပ်စ်တစ်နည်းနဲ့ လုပ်ရမယ်။
Rectal prolapse စအိုကျွံကျနေခြင်း၊
၆ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ Diarrhea ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ Constipation ဝမ်းချုပ်တာ၊ Cystic fibrosis (ဆစ်စတစ်-ဖိုက်ဘရိုးဆစ်) ရောဂါ၊ Malnutrition and malabsorption အစာအာဟာရချို့တဲ့တာ၊ Pinworms (enterobiasis) သန်းကောင်၊ Prior injury to the anus or pelvic area ထိခိုက်မိတာ၊ Whipworm infection (trichuriasis) တုပ်ကောင် သန်ကောင်၊ တွေနဲ့ ဆက်တွဲဖြစ်တတ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ စအိုကိုသုံးရာကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
အစာဟောင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ Ligaments အရွတ်တွေနဲ့ Muscles ကြွက်သားတွေ အားနည်းရာကနေဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်လာရင် တချို့မှာ Anal sphincter စအိုထိန်းကြွက်သားကွင်း အားနည်နေမယ်။
ဝမ်းသွားပြီးရင် နီရဲနေတဲ့ အစာဟောင်းအိမ်အတွင်နဲရံကို စအိုအပြင်မှာ ထွက်ကျနေမယ်။ သွေးလဲ ထွက်နေနိုင်တယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါခံကို ကုသပေးရတယ်။ ထွက်နေတာကို ဆရာဝန်ကနေ ပြန်သွင်းပေးမယ်။ ဒူးထောက်၊ လက်ထောက်၊ ရင်ပတ်အောက်ကပ် အနေအထားနဲ့က ပိုလွယ်မယ်။ တချို့ကို ခွဲစိတ်ကုသပေးရတယ်။ - Abdominal surgery ဗိုက်ကနေခွဲစိတ်နည်းတွေကို လူရွယ်ပိုင်းတွေကို လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Anterior resection နည်း၊ Marlex rectopexy နည်း၊ Suture rectopexy နည်း နဲ့ Resection rectopexy နည်းတွေဖြစ်တယ်။
- Perineal surgery အသက်ကြီးသူတွေကိုလုပ်ပေးတယ်။ Anal encirclement နည်း၊ Delorme mucosal sleeve resection နည်း၊ Altemeier perineal rectosigmoidectomy နည်း နဲ့ Hemorrhoidectomy နည်းတွေ ဖြစ်တယ်။ - Linear cauterization လေတာနည်းကို ကလေးတွေကိုလုပ်ပေးတယ်။
- Manchester operation နည်းဆိုတာ Pelvic prolapse သားအိမ်ကျတာမျိုးနဲ့ တွဲနေသူတွေကို လုပ်ပေးတယ်။
- Robotic-assisted surgery စက်ရုပ်နည်းနဲ့ ခွဲတာလဲ ပေါ်နေပြီ။